Home » Akụkọ Njem njem Hawaii » Hawaii Tourism Authority na-ahọpụta ụdị oche ọhụrụ Quiksilver
Na mbụ na-eje ozi dị ka onye isi oche nke Hawaii Tourism Authority (HTA), a kpọrọ George Kam dị ka onye isi oche ọhụrụ na nzukọ nzukọ kwa ọnwa ụnyaahụ. Ọ bụ onye na-arụsi ọrụ ike na onye ndu obodo ma bụrụkwa onye isi na ụlọ ọrụ sọfụfụ.
Onye isi oche ọhụrụ nke ndị njem nlegharị anya nke Hawaii na-achọ ịchọta onye njem ọhụụ n'oge a nke huliau - mgbanwe mgbanwe.
Ndi otu a hoputara ndi osote onye isi oche abuo na onye isi oche nke ndi otu ahia.
Onye isi oche HTA na CEO na-atụ anya iso ndị isi ọhụụ na-arụ ọrụ.
“Anyị nọ n’oge‘ huliau ’ma ọ bụ mgbanwe mgbanwe. Nke a bụ oge anyị ịchọta ihe ngwọta maka njem njem pono nke na-eme ka ohere nke njem na nsogbu ndị ọ na-eweta na obodo anyị pụta. Njem nlegharị anya nwere ike bụrụ ihe mkpalite iji melite ogo ndụ maka ndị Hawaii niile. Balancechọta nguzozi bụ agụba, obosara ahịhịa pili, ”Kam kwuru. "Ana m atụ anya iso ndị obodo na-arụ ọrụ, ndị isi anyị ahọpụtara, ndị otu HTA na ụlọ HTA iji chọta nguzozi ahụ."
The họrọkwa David Arakawa dịka osote onye isi oche ya, Kimi Yuen dị ka onye osote onye isi oche nke abụọ ya, na Daniel Chun dịka onye isi oche kọmitii na-eguzo ahịa ya. Kam na-anọchi onye isi oche na-apụ apụ Rick Fried, bụ onye kwụsịrị oge ya na bọọdụ na Tuesday ka ndị Senate nke Hawaii kwadoro ndị isi oche ọhụrụ Dylan Ching, Keith "Keone" Downing, na Sigmund "Sig" Zane.